Hery Rajaonarimampianina : “Tsy ilaina intsony ny mampiditra ny firenena amin’ ny krizy” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “Tsy ilaina intsony ny mampiditra ny firenena amin’ ny krizy”
Nandritra ny fandaharana fotoam-bita izay fanaon’ ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina isaka ny zoma hariva no nanambarany fa tsy misy ny tonga lafatra eto an-tany, saingy kosa na izany aza dia tsy hisy afaka hiteny fa tsy nisy ny zava-bita teto amin’ ny firenena nandritra ny fotoam-pitondrany. Nandritra ity fandaharahana ity, dia azo lazaina fa nisy ny tanjona izay napetraky ny filoha Hery Rajaonarimampinina. Izany dia hampitsanganana ny firenena rehefa avy nilomano lalina tao anatin’ ny krizy lavareny , sy eo ihany koa ny fifandimbiasam-pahefana manaraka ny rafitra demokratika,“ fantatro fa maro ireo malagasy no manalameloka ny fihoaram-pefy izay ataon’ ireo solombavambahoaka amin’ izao fotoana izao, indrindra eo ihany koa ireo izay tsy momba ahy. Na izany aza anefa dia efa napetraka ny tanjona, ary hataoko izay hahatrarako izany” hoy ny Filoham-pirenena Malagasy.
« Amin’ izao fotoana izao tokoa dia maro ireo malagasy izay voasakana amin’ ny zon ‘izy ireo, dia ireo maro an ‘isa tsy miteny izany. Tsy misy reha tokoa amin’ izao fotoana izao hafa tsy ny solombavam-bahoaka izay mitaky ny fihalan’ny filoha amperin’asa. Raha jerena anefa ny tantaran’ ny firenena, dia tsara hatrany ny mampahafantatra fa tokony hisy ny fisintonana lesona manoloana ny fahadisoana natao, ary tokony haka lesona tahaka izany ihany koa ny vahoaka malagasy. Raha toa tena hilain’ ny vahoaka tokoa ny fialan ‘ny filoham-pirenena dia volana sisa ilaina, ka noho izany dia tsy vaha olana mihintsy ny hampiditra ny firenena anatin’ ny krizy indray » hoy hatrany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina